admin, Author at Bright News
မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့ တည်ရှိနေတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာများ
တခါတလေမှာ လူသားတွေဟာ အရာရာကို သိပြီးသားလို ထင်မှတ်ကြပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ရှာဖွေမှု အသစ်များကို ပြုလုပ်သည့်အခါမှာတော့ ကမ္ဘာနှင့်ပက်သက်သည့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အမြင်များကို ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ (၁) Embryo mummy ၂၀ ရာစုနှစ်အစပိုင်းတွင် သိပ္ပံပညာရှင်များဟာ ‌သေးငယ်တဲ့ မံမီရုပ်အလောင်းတစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ရှေးအီဂျစ်များဟာ ထိုကဲ့သို့ပစ္စည်းများကို လူ့အစိတ်အပိုင်းနှင့် အလောင်းများကို […]
သဘာဝတရားကြီးက‌ ဖန်တီးထားတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့အရောင်များ
ရှားပါးအရောင်ရှိခြင်း ဗီဇပြောင်းခြင်းတို့ဟာ အကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေတောင် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လုံးဝအသစ်ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ထူးခြားအရောင်ရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ (၁) နေ့ရောညပါ ရောထွေးနေတဲ့ ကြောင်တစ်ကောင် (၂) ဒါကပန်းလေးလား? ဘာလဲ? (၃) အစင်းတစ်ချို့ပျောက်နေတဲ့ မြင်းကျားတစ်ကောင်။ (၄) အတောင်တစ်ခြမ်းဖြူနေတဲ့ ဒေါင်းတစ်ကောင်။ (၅) ပန်းရောင်ကျိုင်းကောင်။ […]
တစ်ခါတလေမှာ ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်၏ တနေ့တာ ဖြစ်စဉ်တွေဟာ အလွန်အံဩဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။ယခုဖော်ပြတင်ဆက်ပေးမယ့်ဓာတ်ပုံတွေဟာရုတ်တရက်မြင်လိုက်ပါကသဘာဝဖြစ်ရပ်တွေလို့ထင်သွားစေနိုင်ပြီးတကယ်တော့ဒါကသေချာကိုရိုက်ကူးထားတဲ့အချိန်ကိုက်ရိုက်ချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 17# 18# 19# 20# […]
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကမ္ဘာဂြိုလ်ကြီးဟာ အံဩဖွယ်ကောင်းလှပြီး အလှတရာများစွာရှိသဖြင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကုန်လုံးကိုမြင်နိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်လှပါဘူး။ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီမှာ တော့သွားရောက် တွေ့မြင်ချင်တဲ့ နေရာ တစ်ခုစီ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ (၁)ပန်းပွင့်များဖြင့် နူးညံသိမ်‌မွှေ့ နေတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ ပန်းဥယျာဉ်။ (၂)Machu Picchu မြို့ရှိ Inca trail မှာလမ်းလျောက်ရတာဟာအရမ်းကိုမိုက်တဲ့ခံစားချက်ကိုရစေမှာပါ။ လွန်ခဲ့သော နှစ် […]
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် လူသိများပြီးပြုလုပ်လေ့ ရှိတဲ့ မင်္ဂလာဆောင် ရိုးရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ သတို့သားနဲ့ သတို့သမီးဟာ ပန်းစည်းကို နောက်က လူပျို အပျိုတွေထဲ ပစ်ထည့်သည့်ရိုးရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချို့သော ဓလေ့ထုံးတမ်းများဟာ နိုင်ငံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအရ ကျင့်သုံးလေ့ ရှိပါတယ်။ (၁)သစ်ခုတ်ဖြတ်ခြင်း ဂျာမနီ။ ရှေးဂျာမန် မင်္ဂလာပွဲ တွေဟာ သစ်တုံးကို လက်ကိုင်နှစ်ဖက်ပါသော […]
တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များမွေးမြူခြင်းကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။လူအများစုက တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားခြင်းဖြင့် ယဉ်ပါးအောင်လုပ်နိုင်သည်ဟုယူဆကြသော်လည်း တစ်ချို့ကမူထိုအရာက အကျိုးမရှိဘူးဟု ထင်မြင်ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းတွင်တော့ လူသားများက တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကို ထိန်းချုပ်ထားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘဲသဘာဝအတိုင်းသာထားသင့်ကြောင်းသိရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ (၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) (၈) (၉) (၁၀) (၁၁) (၁၂) (၁၃) (၁၄) (၁၅) (၁၆)
ဆောက်လုပ်ရေးသမားများရဲ့ ကမ္ဘာကျော်သွားစေမဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးအလွဲများ ဓါတ်ပုံ – ( ၂၀ )
ခေတ်ကာလရဲ့တောင်းဆိုမှုအရ ဆောက်လုပ်ရေးသမားများဟာ ယနေ့ခေတ်မှာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်လာနေပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ ဆောက်လုပ်ရေးသမားများဟာလဲ လူထဲကလူတွေဘဲမို့ အမှားနဲ့မကင်းနိုင်ကြပါဘူး၊ သို့ပေမဲ့ တစ်ချို့သောအလွဲများကတော့ အတွက်ချက်လွဲမှားစွာနဲ့ အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်ကို လွဲချော်တာကတော့ လက်မခံနိုင်စရာကောင်းလှပါတယ်၊ ယခုဖေါ်ပြပေးမှာကတော့ ဆောက်လုပ်ရေးသမားများရဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှ အလွဲများဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ […]
ပုံစံအမျိုးမျိုးအိပ်တတ်ကြတဲ့ ကြောင်လေးတွေရဲ့ ရယ်စရာဓာတ်ပုံများ – ၂၀ ပုံ
ကြောင်မွေးထားသူများက မိမိရဲ့ကြောင်အကြောင်းကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကြောင်လေးတွေဟာ အချိန်မရွေးနေရာမရွေး အိပ်တတ်ကြပါတယ်၊ အချို့သောကြောင်များသည် အိပ်စက်ခြင်းအနုပညာကို ကျွမ်းကျင်စွာတတ်မြောက်ခဲ့ကြသောကြောင့် ဘယ်လိုပင်နှောက်ယှက်ပါစေ သူတို့၏အိပ်စက်ခြင်းသည် ပြတ်တောက်သွားခြင်းမရှိနိုင်ပါ။ ယခုတစ်ခါမှာတော့ အိပ်စက်ခြင်းအနုပညာကို တစ်ဖက်ကမ်းခက်တတ်မြောက်ကြတဲ့ ကြောင်လေးတွေရဲ့ ရယ်စရာ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ […]
ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ မတူညီတဲ့အရာများစွာနှင့် ကွဲပြားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အလွန် အံဩစရာကောင်းစေပါတယ်။ ခုဖော်ပြမဲ့အရာတော်တော်များများကို သင့်မြင်လိုက်ပါကသင်အတွက်ကိုအံ့ဩစရာတွေယူဆောင်လာပေးနိုင်ပါတယ်။ (၁)ပင်လယ်လိပ် Leatherback၏ ပါးစပ်။ (၂)ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြည့်မှန်ဘီလူးမှမြင်ရသောနေလုံး။ (၃)ဆင်ခြေထောက်ရုပ်ကြွင်းတစ်ခု။ (၄)ကီဝီငှက်ရဲ့ ဗိုက်ထဲတွင်တွေ့ရတဲ့သူ့ရဲ့ဥ။ (၅)အာကာသစခန်းတစ်ခုမှ မြင်ရသော တောမီးလောင်ခြင်း။ (၆)Pisaတာဝါ၏ ရှင်းလင်းနေသော အတွင်းပိုင်း။ (၇)အေးခဲနေတဲ့ရေတံခွန်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ။ (၈)Platypus ရဲ့ […]
မိန်းကလေးတစ်ဦးက ယောကျ်ားလေးတစ်ဦးကို စိတ်ဝင်စားနေပြီဆိုတာ သိနိုင်တဲ့အချက် ( ၆ ) ချက်
ဒီအရာကတော့ မည်သူမဆို နားလည်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။မိ်နးကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကိုခန်မှန်းနိုင်ဖို့က မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ သင်ထင်မိမှာပါ။(မိန်းမမာယာ သဲကိုးဖြာဆိုတာလည်းရှိသေးတာကိုး)။အမျိုးသားတစ်ဦးအနေနဲ့ မိမိရဲ့ ချစ်သူသို့မဟုတ် ဇနီး မယားအပေါ်နားလည်နိုင်ဖို့က အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အရာပါ။လူတိုင်းကတော့ မိမိ Crush နေရတဲ့ သူမိမိအပေါ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေသလားဆိုတာကိုတော့ လူတိုင်းသိချင်ကြပါတယ်။ အခုပြောပြတဲ့ အရာတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ သူရဲ့ […]